✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७८ बैशाख २७, सोमबार १९:०८
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा ओलीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको बहुमत गुमेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४ र तटस्थ १५ मत परेको थियो । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका २८ सांसद सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन बोलाएको बैठकमा एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित भएका हुन् । एमालेका बाँकी ९३ सांसदले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपां ले पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएनन् । विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् ।
एमालेका अनुपस्थित सांसदहरुः
६. गोकर्ण विष्ट
७. योगेश भट्टराई
८. मुकुन्द न्यौपाने
९. सोमप्रसाद पाण्डे
११. रामकुमारी झाँक्री
१२. गणेश पहाडी
१३. जयकुमार राई
१४. यज्ञराज सुनुवार
१५. नारायण खतिवडा
१६. पवित्रा निरौला खरेल
१७. भवानी खापुङ
१८. दीपकप्रकाश भट्ट
२०. पुष्पाकुमारी कर्ण
२१. झपट रावल
२२. मेटमणि चौधरी
२३. सरला यादव
२५. कल्याणी खड्का
२६. निरादेवी जैरु
२७. कलिला खातुन
२८. लक्ष्मीकुमारी चौधरी